Maxay ahaayeen hubkii iyo lacagtii ay ciidamada DFS ka soo qabteen guriga Madaxa Shirkadda Hubaal Forex? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxay ahaayeen hubkii iyo lacagtii ay ciidamada DFS ka soo qabteen guriga...
Maxay ahaayeen hubkii iyo lacagtii ay ciidamada DFS ka soo qabteen guriga Madaxa Shirkadda Hubaal Forex?
Muqdisho (Halqaran.com) – Ciidamada ammaanka Dowladda Federalka Somaliya ayaa xalay gudaha u galay guriga uu Magaalada Muqdisho ka daganaa Madaxa shirkadda Hubaal Forex Trading, Maxamed Ismaaciil Cali oo dalka dibadiisa ku maqan, kadib markii lacag uu la goostay.
Gurigan oo ku yaala xaafadda Buulo Xubey ee Degmada Wadajir, ayaa waxaa suuragashay in ciidamada ammaanka ay ka soo qabtaan hub yaalay saqdii dhexe ee xalay.
Saraakiil ka tirsan Hay’adaha ammaanka dowladda, ayaa waxa ay warbaahinta Halqaran.com u sheegeen guriga in laga soo bixiyay hub badan iyo lacag kaash oo dollar ah oo guriga dhextiilay.
Waxaa kale oo gacanta lagu soo dhigay rag ku sugnaa guriga, kuwaasi oo ciidamada ammaanka ay baaris ku hayaan, maadaama ay la shaqaynayeen ninka lacagta badan la baxsaday.
Madaxa Shirkadda Hubaal Forex Trading, Maxamed Ismaaciil Cali ayaa hadda wuxuu ku sugan yahay dalka Turkiga, kadib markii isaga & rag kale oo la shaqeeya ay la baxsadeen lacag badan, kuwaasi oo ay kala goosteen shacabka Somaliyed, maadaama dadka ay gaysteen lacagtaasi xarunta Shirkadda Hubaal oo sarifka Online-ka ee Forex ay ku shaqeynaysay.
Hay’addaha ammaanka dowladda ayaa dareen ka muujinaya hubka badan ee laga soo qabtay guriga Madaxa Shirkadda Hubaal Forex, maadaama uu yahay nin shacab ah oo dad Somaliyeed hanti badan kala goostay, sidoo kalena la raadinayo.
Xarunta Shirkadda Hubaal Forex oo ku taala Degmada Hodan, meel ku dhaw Isgoyska KM4 ayaa shalay waxaa lagu arkaayay dhalinyaro badan oo ku sii qul quleysa, si ay lacagahooda halkaasi ugala soo baxaan.
Dadka ku nool Magaalada Muqdisho ayaa dareen ka muujinaya xarumaha Forex ee ku yaala magaalada gudaheeda, iyadoona ay hoos u dhacday kalsoonidii dareenka ku dhisneyd ee shacabku ku qabeen.
ciidamada dowladda soo qabtay
hub iyo lacag la soo qabtay guriga
Madaxa shirkadda Hubaal Forex Trading